आफुलाइ एउटा सक्षम र सफल नागरिक साबित गर्नेछु
सरस्वती अधिकारी,नेतृ, राप्रपा
तथाकथित राणा शासन र सामन्तीवाद अर्थात पन्चायती ब्यवस्था फालियो अनि अबत सबै समृद्धिका ढोका खुले भनेको त झन देश दिनानुदिन कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । देशमा, लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र छ । जनताले बनाएको संबिधान, कानुन छ । जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधि छ्यास छ्यास्ती छन । तर पनि केले र कसले रोक्यो त देशलाई समृद्धिको बाटोमा पुराउन ? एक पटक सबैले मनन गरौँ । हामी कुन बाटो हिड्दैछौ ? खुल्ला हृदयले आफू भित्रको स्वार्थलाई मेटाऔ । एकजुट भएर काम गरौँ यहि छ स्वर्ग ।
महिलालाइ दोश्रो दर्जामा थान्काउनुलेपनि हाम्रो देश धेरै कुरामा पछि परेको हो । समुन्नत नेपाल निर्माणका निमित्त महिला र पुरुषले कानुनी एबम सामाजिक मर्यादा दुबै हिसाबले समान नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्नु अनिवार्य बिषय हो । दुबैले क्षमता बिकास गर्ने अवसर र समान रुपमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सक्ने बातावरण बनाउनु गहण विषय बनेको छ । हुनत महिला अधिकार, न्याय र मुक्तिका नाममा चर्को आन्दोलन पश्चात् नै महिलाले सास फेर्न पाएका छन । ३३ प्रतिशत महिला अधिकार दिएको छ भनेर थामथुम पार्ने बाटो सहज भएको देखिन्छ । यो नि हाम्रो उपलब्धी नै हो । महिला आन्दोलनका अगुवा आमा दिदिहरुको ठुलो योगदानबाट स्थापित अधिकार अहिले हामी आफैले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु हाम्रो आफ्नै कमजोरिपन ठान्दछु । हिजो काखको बच्चा छोडेर बन्दुक बोक्न तयार हुने र हजारौं नेतालाइ देशको उच्च पदमा पुर्याउन सफल हामी महिलाले कार्यान्वयन गर्न फेरि बन्दुक बोक्नु पर्ने नै हो र ?
आज आएर झन महिला माथिको भेदभाव, घरेलु हिंसा बलात्कार , सामाजिक तिरस्कारको सिकार हुनुपरेको छ । महिलाको माग पुरुषको अधिकार खोस्ने होइन पुरुष सरह समान नागरिकको दर्जा हो । एउटा सबल र समुन्नत देश र बिश्व निर्माणमा महिलको भुमिका अथक थियो र छ । भोलिका दिनमा नि एउटा परिवार र देशलाई सहि मार्गमा पुरयाउन र देशको स्वाधीनता सार्वभौमसक्ता रक्षाको निमित्तपनि विषम परिस्थितिमा महिलाको भुमिका अहम रहनेछ । जङ्गल,जडिबुटी उर्वर जमिन मेहनति हामी छौ तर, कहाँ नीर चुक्यौ सोच्ने बेला ढिला भैसकेको छ । राजनिती गर्ने नेताले मात्र देश बनाउन सक्दैनन । जब सम्म हामी जनता चेतनशिल, जागरुक र परिश्रमी बन्दैनौ र नेताले गरेको खराब र भ्रष्ट कामको खबरदारी गर्दैनौ तबसम्म देश बन्दैन ।
यहाँ नागरिक धनी र देश गरिव छ । व्यक्ति धनिले अर्थ राख्दैन राष्ट्र धनी हुन जरुरी छ तब मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी नेपाली र हाम्रो देश नेपालको शिर उच्च रहनेछ । खान त जन्मेपछी जुन तह र तप्काको मानिसले पनि खाएको हुन्छ र खाएको छपनि । तर जन्मेपछी समाजमा केही गरौँ र मरौ भन्ने भावना जागृत हुन जरुरी छ । जबसम्म पुरुष भित्रको अहमता स्वार्थ, हेपाहापन हट्दैन तब सम्म देशले बिकासको पाइला द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्दैन । आफ्नो स्वार्थको निमित्त महिला अघि सार्ने र आफ्नो खुसीमा महिला खेलौना बनाउने पुरुष भित्रको रोग नै हो । मैले सबै पुरुष यसमा पर्छन भन्न खोजेको होइन । तर, परापुर्व कालदेखी नै महिलाहरु शोषण परेका घटना छन्। पुरुष स्वार्थकालागि माता सिताले रावणको अपहरणमा पर्नु पर्यो। दाजुभाइको सम्पत्तिकालागि द्रोपतिको आफ्नो अस्मितामा दाग लगाउनुपर्यो। हरेक इच्छा पुर्ती गर्न पुरुषले महिलालार्इ प्रयोग गरेको उदाहरण हाम्रो माझ छर्लङ्ग छ । अहिले त झन समाज र देश निर्माणमा महिलालार्इ अघि सार्नु,सघाउनु त कता हो कता महिला घर भित्रै सुरक्षित छैनन् । कसलाइ आफ्नो मान्ने महिलाले ? कुन सम्बन्धमा बिश्वास गर्ने अब ? त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैन जहाँ महिला सुरक्षित हुने । आजको परिवेशमा त झन झन पीडित, शोषित छन महिला । देशको सरकार नै महिलालार्इ न्याय दिनुको सट्टा दोषीलाई उम्काउने काम गर्दै छ ।
कानुन पैसामा बिक्छ । घर परिवारको सहयोग मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कहाँ जाने महिलाहरु ? पहिला पहिला बरु न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने उखान थियो । हुन नि गएर आफ्नो कुरा खुल्ला रुपमा पाइन्थ्यो र न्याय मिल्थ्यो । अहिले त कुरा राख्न पाउने ढोका खोज्न पनि गाह्रो छ । किन ससंकित छन महिला देखि पुरुष जवाफ खोज्न मन छ ।
शहरमा बस्ने र हिड्नेलाइ उत्ताउली र बिग्रेकि छाडा उपनाम पाएका महिलाहरू जङ्गलमा बस्ने घरका चोटा, पिडि ,भर्याङ् र पलङ्गको समेत महशुल गर्न नजान्ने ती अबोध राउटे चेलीले समेत आफ्नो अस्मिता जोगाउन सकेनन । अस्मिता त लुटियो लुटियो अब बाकी जीवन नै खुकुरीको धारमा राख्नु पर्ने रे । के अपराध गरेथे उनिहरुले ? कस्तो कानुनु हो त्यो समाजको ? किन भएनन उनिहरु सुरक्षित ? यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले जिम्मा लिदैन उनिहरुको जिवनको भने किन चाहियो महिलालार्य कानुन ? किन गर्ने महिला अधिकारका चर्का कुरा ? किन चाहियो सरकार ? किन चाहियो प्रहरी प्रसाशान ?
अब हजारौ सम्झना राउटे जस्तै जीवन बिताएका महिला बाहिर निस्कन जरुरी छ । कति निर्दयी र राक्षसपन लुक्दोरैछ पुरुष भित्र जगजाहेर छ । जसको कारण निर्मला पन्त, सबिता भण्डारी जस्ता हजारौं महिलाले न्याय पाएका छैनन । अब पनि पुरुषकै भरोसामा बाच्ने हो भने अझै धेरै महिलाले ज्यान गुमाउनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म पुरुषले महिलालाइ मान्छे हो भन्ने समान दृष्टि राख्दैन, उ आफूपनि अघि बढ्न सक्दैन र उसको जीवन पनि सफल हुदैन । सृष्टि चलाउन महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन् । महिलाको भुमिका बिना एउटा पुरुषपनि खुसी र सफल हुन असम्भव छ ।
प्रकृतिले महिला र पुरुषलाई विशिष्ट र फरक बनएको छ तर भेदभाव गरेको छैन । महिलाले आफुले पाएको हरेको जिम्मेवारी सफलता पुर्वक निभाएका प्रशस्त उदाहरण छ । जुन घरमा महिलालाई दासी ठानिन्छ त्यो घर स्वर्ग बन्दैन । जुन घरमा महिलाको इज्जत सम्मान गरिन्छ त्यहाँ स्वर्ग जस्तै सुखमय परिवारको निर्माण भएको देखिन्छ । घरका महिलालाई मात्रै होइन सबै महिलाइ लाई समान दृष्टिबाट हेरियो भने यस्तो आतंक मच्चिदैन देशमा । महिलालाई समान नागरिकको अधिकार ,सुरक्षा, अवसर प्रदान गरेमा मात्रै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
हामी महिलालेपनि आफुलाइ सक्षम बनाउनुपर्यो । महिलाहरू अरुको सहाराको आशा गर्छौ यो हाम्रो कमजोरी हो । आट गर्यौ भने हामी आफै भित्र छ क्षमता कस्तुरीको नाभिमा भए झै । तर हामी पुरुषको भर पर्छौ । पुरुष हाम्रा सहयोगी हुन, सारथि हुन सहयात्री हुन तर सब चिज होइनन । शब्द हुन तर आवाज आफै निकाल्ने हो । आवाज र अधिकार दुबै बुलन्द पर्न पछि हट्नु भएन । महिलामा अदभूत शक्ति हुन्छ । हरपल चुनौतीको सामना गर्दै समाधान निकाल्ने क्षमता हुन्छ महिलामा। रगत रगतमा सकारात्मक उर्जा बगिरहेको हुन्छ । दया माया, करुणा र बिश्वासले भरिएको हुन्छ । मात्र प्रभावशाली बन्न अवसर र प्रेरणादायी साथको खाचो हुन्छ । अब महिला कातर बन्ने होइन आफ्नो अघि आउने हर बाधालाइ पन्छाउदै सफलताको बाटोम लम्किने हो ।
जुन अवसरलाई पाएनौ अब कुर्ने होइन त्यसलाई छोडिदिउ । असफलता जिवनको अन्त्य होइन । कसै बाट पीडित हुनु आफ्नो दोष होइन । निरन्तर अधि बड्नु त्यो जिन्दगी हो ।
सबै महिलाले अब जप्नु पर्ने मन्त्र हो, न म चुपचाप बस्छु । न म कमजोर छु । न पछाडी हट्छु । न अन्याय सहन्छु । न म कुनै सम्झौता गर्छु । न म अपमान सहन्छु । न म रोकिन्छु । न म कसै सङ्ग झुक्छु । न म डराउछु । म निरन्तर आफ्नो पाइला लक्ष्यमा अडिग भै अधि बड्छु। आफ्नो लागि आफै उभिन्छु । आर्थिक रुपमा बलियो हुन्छु । र आफुलाइ एउटा सक्षम र सफल नागरिक साबित गर्नेछु ।
यहि बाचा मनन गरि जहाँ जस्तो अवस्थामा छौ त्यहीँ बाट आफुलाइ अधि बढाऔँ । उठ जाग, चम्क र लम्क नारी शक्ति अब । शत्रुता होइना सहयोगिपनको हातेमालो गर्दै अधि बढौँ । हाम्रो पिडा भाबी छोरिहरुले भोग्न नपरोस । अनि मात्र हाम्रा भावी छोरिहरु सुरक्षित होलान । हाम्रा सन्ततिले हामिलाइ सम्झेलान । आज राम्रो गरे भोलि त आफै राम्रो हुनेछ ।